Warbixin - Ka hortagga Korona
Halista Cudurka Corona wali ma dhamaanin
Hay’adda UNDP ayaa waxay mar kale la kaashatay bahda KALA-MAAN, oo soo saarta barnaamijyada loogu dhageysiga badan yahay idaacadda KULMIYE. Qeybta labadaab ee barnaamijka KALA-MAAN waxuu ku saabsanyahay xusuusin bulshada la xusuusinaayo in khatarta cudurka Corona aysan wali dhamaanin. Halkan ka dhageyso. Fadlan la wadaag asxaabtaada.
Fanaaniin Soomaaliyeed oo soo saaray hees cusub oo ka hadleysa khatarta cudurka Covid-19 ee wali ka jirta Soomaaliya
Fanaanka caaanka ah ee Aar Maanta iyo kooxda Muusig soo-saarayaasha ee Waqal Studio, ayaa daah-furay iskaashi cusub oo ay hees si wada jir ah kula sameeyeen qaar ka mid ah kuwa ugu caansan Fanaaniinta Soomaalida, si ay dadka uga wacyi-galiyaan halista uu fayraska Korona ku hayo Soomaaliya, kaasoo wali khatartiisu ay dalka ka jirto. Heestan … →
Muuqallaalkii majaajillada ugu dambeeyay ee hay’adda UNDP ayaa dadka ku dhiira-galinaya in ay xirtaan af-daboolka iyo inay isaga qoslaan fuquuqa ka dhanka ah xirashada af-daboolka. Maadaama uu dalkii ku jiro xaaladda cudurka safmareenka ah, dadku waxay billaabeen in ay xirtaan Af-daboolka balse waxay la kulmayaan dacaayad iyo fuquuq la xiriira xirashada af-daboolka. Qeybtii ugu dambaysay … →
Dadkii ku guuleystay Tartankii Muuqaal-sameynta ayaa innooga warramay sida uu Fayraska u saameeyay qoyskooda iyo bulshada. Tartanka Kahortagga cudurka COVID-19 ee hay’adda UNDP waxaa ka soo qeyb galay dad ka kala yimid dhammaan dalka Soomaaliya. Kuwii ku guuleystay ayaan weydiinay sida uu Fayraska u saameeyay. Si wada jir ah ayey kusoo gudbiyeen seddex qaab oo … →
Abdijabaar Dahir waa 11 jir ku nool magaalada Qardho.
15 June 2020, Mogadishu- Waxaa maanta la shaaciyay dadkii ku guuleystay Tartankii labada billood socday oo loogu tala galay muuqaal-sameynta wacyi-gelinta cudurka Covid19. Abaalmarinta kowaad oo ahayd lacag $1,000 ah waxaa la guddoonsiiyay muuqaal ay soo saareen wiil arday da’yar ah iyo walaashiis oo ku nool magaalada Qardho ee Puntland. Cabdijabar Daahir iyo walaashiis Saynab … →
“Dadka iyago qoslaya ayaan fariimaha caafimaadka u gudbinaa” Majaajillada iyo wacyigelinta Kahortaga Corona
Majaajileystaha caanka ah ee Abdiqani Iskufilan iyo kooxdiisa ayaa ka qeyb qaadanayaa ololaha ballaaran ee looga hortagaayo faafida Fayraska Corona ee haya’adda UNDP ka wado Soomaaliya. Usbuucyadii lasoo dhaafay ayaa Iskufilan iyo kooxdiisa waxay soo saareen muuqaallo taxane ah oo xambaarsan fariimo caafimaad oo muhiim ah. Fariimahaas oo tilmaamaya halista uu leeyahay cudurka Corona iyo … →
Naciima Abwaan Qorane oo ah Gabyaa u ololeysa Nabadda ayaa ka mid noqotay Taageerayaasha sare ee Ololaha Wacygelinta Kahortaga Fayraska Corona ee hay’adda UNDP ka wado Soomaaliya. Naciima oo kaashaneysa hay’adda UNDP ayaa waxay soo saartay Gabay xiiso leh oo ay uga hadleyso saameynta uu leeyahay cudurka Corona iyo sida looga hortagi karo. “Sharaf bey … →
Ciidamada xooga dalka ayaa ka qeyb qaadanaya Ololaha qaran ee lagula dagaallmaayo cudurka Fayrsaka dilaaga ah ee loo yaqaanno Covid19. Sida looga bartay markasta oo ay musiibo qaran dhacdo, ciidamada xooga dalka waxay qeyb libaax leh ka qaataan samata-bixinta ummadda Soomaaliyeed. Iyagoo gudanaya waajibkooda qaran ayaa waxay bilaabeen inay wacyigelin u sameeyaan bulshada ku dhaqan … →
‘Waxaan ka mid ahay bukaannada qaba coronavirus ee ku jira isbitaalka Martiini’
Nin dhalinyaro ah, oo ka mid ah bukaannada qaba xanuunka coronavirus ayaa ka warramaya waxa ka socda gudaha isbitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho, halkaasoo uu sheegay inuu si iskiis ah u atgay markii uu isaga shakiyay cudurka. Bashiir Qaasim Maxamed, sheegay in markii hore uu isbitaallo kale tagay, laakiin ugu dambeyntii uu go’aansaday inuu lugihiisa … →
Tirada dadka cudurka Fayraska laga helay oo kor u sii socota
Warbixinti ugu dambeeyay oo ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ayaa lagu sheegay in tirada dadka cudurka fayraska Corona uu ku dhacay ay gaartay 286 qof wadanka oo dhan. Tani waxay cadayn u tahay in cudurka uu bulshada dhexdeeda ku sii faafaayo. Xaaladu wey sii adkaaneysaa, waa laga soo tagay xilligi la eedeyn … →